Sarkaal ka tirsanaa hay'adda Cilmi-baarista Puntland ee PDRC oo Xalay lagu dilay Waqooyiga Magaalada Gaalkacyo
Dabley hubeysan ayaa xalay waqooyiga magaalada Gaalkacayo ee xarunta gobolka Mudug ku diley sarkaal ka tirsanaa Hay'adda Cilmi Baarista Puntland ee PDRC, xafiiskeeda gobolka Mudug.
Sarkaalkan oo lagu magacaabi jirey C/naasir Maxamed Cilmi ayaa la toogtey abbaare 8:30 fiidnimo ee xalay, xilligaas oo uu kasoo baxay masjid kudhow gurigiisa oo uu salaaddii Taraawiixda kusoo tukadey.
Dableyda dilka geysatey oo aan ilaa iyo hadda haybtooda la aqoonsan ayaa durbadiiba goobta ka baxsaday. Waxaa iyaguna daqiiqado kadib goobta soo gaarey Ciidamada Booliska. Inkasta oo ay baaritaan muddo kooban socdey sameeyeen; hadana kuma guuleysan in ay falkaas cid usoo qabtaan.
Waa sarkaalkii labaad ee ka tirsan Hay'adda PDRC ee lagu dilo magaalada Gaalkacayo tan iyo sanadkii 2011, sidoo kale wuxuu saddex ka dhigayaa tirada guud ee dadka bishan gudeheeda lagu diley magaaalada Gaalkacayo.
Dilalka qorsheysan ayaa todobaadyadii u danbeeyey kusoo badanayey magaalada Gaalkacayo ee xarunta gobolka Mudug, waxaase xusid mudan in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ay magaalada Gaalkacayo ahayd mid aad u xasilloon .
Madaxweynaha Dowladda Somalia oo sheegay in Dowladdiisu ay diyaarisay kumannaan ciidammo ah muddadii ay jirtay
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay kulan kula yeeshay xarunta madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in dowladdiisu ay muddadii ay jirtay ay diyaarisay ciidammo gaaraya 5,000 oo askari oo loogu talogalay sugidda ammaanka dalka.
Xasan Sheekh wuxuu sheegay in dowladdiisu ay qabatay wixii ay kari kartay tan iyo markii ay xafiiska la wareegtay, ayna qabanayso wax walba oo ay haaban karto, isagoo xusay inay ku dhaqmi doonaan shuruucda dalka u taalla.
“Dowladda Soomaaliya intii ay jirtay waxay diyaarisay 5,000 oo askari oo saraakiil Soomaali ah ay tababarro siiyeen, dowladda ayaana ku biisha xeryo ay ku jiraan, waayo ma haystaan hub ay ku howlgalaan,” ayuu Xasan Shiikh ku sheegay hadal uu odayaashii uu xalay la kulay.
Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale sheegay in dowladdu ay u iibisay askarta gaadiidkii ay u baahnaayeen, ayna markii loo hub howlgeli doonaan, isagoo sheegay in sidoo kale ay dowladdu isku diyaarinayso wax ka qabashada amniga guud ee dalka.
Sidoo kale, madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ka jawaabay su’aalo dhowr ah oo ay weydiiyeen odayaashii uu la kulmay, kuwaasoo ay ku jireen dhismaha maamul goboleedyada, isagoo sheegay in dhismaha maamul goboleed ay yihiin kuwo shuruuc kala duwan maraya.
“Dhismaha maamul goboleedyada waa kuwo maraya shuruuc kala duwan, mana ahan kuwo ku imaanaya mid aan anigu jeclahay ama qof kale uu jecel, yahay, balse waa kuwo ku imaanaya sharciyo, waxaana dhawaan la ansixiyay sharciga dhismaha maamul-goboleedyada dalka, waxanaa keliya ee ka dhimanna waa saxiixa madaxweynaha,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Isagoo dhismaha maamul-goboleedyada ka hadlayay ayuu sheegay inay ka shaqeynayaan sidii maamul goboleedyada dalka ay u noqon lahaayeen kuwo awood leh, halka dowaldihii hore ee dalka ka jiray ay awoodda inteeda badan lahayd dowladda dhexe.
Waxgaradkii iyo odayaashii kulanka la qaatay madaxweynaha ayaa waxay weydiiyeen su’aalo kala duwan oo ku saabsan habka ay dowladdu u shaqeyso, waxaana qaarkood ay dhaliil u jeediyeen dowladda, kuwaasoo uu ka jawaabay madaxweynaha.
“Ma ahan idinka oo keliya inaad wax nooga baahan tihiin, laakiin waxaan idin kaga baahannahay ayaa ka weyn, waxaana ku talinayaa in la sameeyo gole odayaal ah oo isku xira dowladda iyo odayaasha si loo kala warqaato,” ayuu kusoo gabagabeeyay hadalkiisa.
Kulankan oo ahaa kii ugu horreeyay noociisa oo dhexmara madaxweynaha iyo odayaasha dhaqanka Somaaliyeed ayaa waxaa soo qabanqaabiyay maamulka gobolka Banaadir, wuxuuna ahaa mid afur ah.
DANJIRE NICHOLAS KAY: “Awooddii Al-shabaab hoos ayaa loo dhigay, balse weli waa koox khatar ku ah amniga Soomaaliya”
Ergayga Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, danjire Nicholas Kay ayaa sheegay in awooddii Al-shabaab hoos loo dhigay, balse ay weli tahay khatar muuqata oo Somalia ka jirta.
Nicholas Kay oo bishii lasoo dhaafay la wareegay xilka Qarmada Midoobay ee arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay guulo waaweyn ka gaareen dagaalkii ay la galeen kooxda Al-shabaab oo uu ku tilmaamay koox xag-jir ah.
“Awoodda Al-shabaab inay hoos u dhacday waxaa caddeyn ah hoggaamiye sare oo ka tirsan kooxdan ayaa ku jira xabsiga dowladda Soomaaliya, taas waxay caddeyn u tahay in kooxdan ay kala qaybsan tahay awood ahaanna ay hoos u dhacday,” ayuu yiri Kay.
Sidoo kale, ergaygu wuxuu hadalkiisa ku daray in isi soo dhiibidda Sheekh Xasan Daahir Aweys ay tusaale u tahay kala jabka kooxda, isagoo intaas ku daray in kooxdan ay weli awood u leedahay inay weerarro ka geysato magaalada Muqdisho.
“Isi soo dhiibidda Sheekh Xasan Daahir waxay muujinaysaa cadaadis ka jira gudaha Al-shabaab. Laakiinse weerarradii ay bilihii ugu dambeeyay geysatay Al-shabaab waa kuwo muujinaya inay weli tahay koox awood leh,” ayuu yiri eragaya oo la hadlayay shabakadda African Report.
Khabiir u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo, Ken Menkhaus ayaa sheegay in kooxda Al-shabaab ay aqoon durugsan u leedahay marka la eego taariikhihii soo maray inay dib isku abaabusho, taasna ay tahay midda sababtay inay heerkan soo gaaraan.
“Al-shabaab waxay awood u leedahay inay dib isku abaabusho oo ay ciidan ahaa dib isku dhisto, taasina waa mid keeni karta inay dhibaato ka geysato Soomaaliya,” ayuu yiri Menkhaus.
Xarakada Al-shabaab oo horay u sheegtay inay ugu biirtay Al-Qaacida ayaa waxaa lasoo gudboonaaday dib u dhac weyn tan iyo markii Mareykanka uu dowladda Soomaaliya u aqoonsaday sannadkii hore uuna u ballanqaaday lacago deeq ah.
Laakiinse weerarro kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwo isugu jira bambooyin iyo qaraxyo ismiidaamin ah ay muujinayaan in kooxdan ay weli tahay mid nool oo weerarro geysan karta.
Ganacsade Soomaaliyeed oo Xalay Lagu Dilay Dukaan uu ku lahaa duleedka Magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika
— Ganacsadihii saddexaad ee todobadkan lagu dilo dalka Koonfur Afrika ayaa xalay lagu dilay duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika, kaddib markii lagu weeraray dukaan uu halkaas ku lahaa.
Ganacsadaha la dilay oo lagu magacaabi jiray C/qaadir Axmed-dey Cali ayaa waxaa lagu weeraray dukaankiisa kaddib afarkii xalay, waxaana dilkiisa loo adeegaday rasaas sida uu sheegay ruux ay ehel yihiin oo ku sugan Koonfur Afrika.
“Marxuumka waxaa ku weeraray dukaankiisa saddex nin oo hubeysan, isla goobta ayayna ku dileen, iyagoo qaatay lacago dukaanka yaalay iyo qalab kale oo fudud,” ayuu yiri ganacsade kale oo ay ehel ahaayeen ganacsadaha la dilay.
Ganacsadahan ayaa wuxuu ka dhigayaa qofkii saddexaad oo toddobaadkan oo keliya lagu dilo gudaha dalka Koonfur Afirka, iyadoo habeen hore la dilay ganacsade Soomaaliyeed kaddib markii lagu weeraray dukaankiisa, kaasoo la aasay shalay.
Dilalka loo geysanayo ganacastada Soomaalida ee ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa u muuqda kuwo soo kordhaya, iyadoo xukuumadaha Somalia iyo Koonfur Afrika ay dhawaan kala saxiixdeen heshiis ku saabsan ciidamada ay uga howlgeli lahaayeen goobaha ay dilalka ka geystaan kooxaha burcadda ah si loo yareeyo dhibaatooyinka loo geysto ganacsatada Soomaalida ah.
Dhawaan ayay ahayd markii safiirkii Soomaaliya ee Koonfur Afrika uu si lama filaan ah ugu geeriyooday isbitaal ku yaalla xarunta dalkaas, kaddib markii uu lasoo darsay xanuun deg-deg ah.
Safiirka oo ahaa midkii ugu horreeyay ee Soomaaliya ay u dirasato dalkaas ayaa wuxuu si aad ah uga shaqeyn jiray sidii loo yareyn lahaa dhibaatada loo geysto Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika.
Qarax lagu Weeraray Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo ka dhacay Degmada Xamarweyne ee Muqdisho
Qarax xooggan ayaa goor-dhaw ka dhacay degmada Xamar-weyne ee gobolka Banaadir, kasoo ka dhashay gaari ay wateen xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, iyadoo aysan jirin wax dhibaato ah oo xildhibaannada kasoo gaartay qaraxaas.
Qaraxan oo ahaa ka dhashay miino lagu xiray gaariga ay xildhibaannadu wateen ayaa dilay qaar ka mid ah ilaaladii gaariga la socday iyo dadka shacab ah oo goobtaas ku sugnaa, waxaana burbur xooggan uu soo gaaray gaarigii.
“Mar qura ayaan maqalay qarax aad xooggan wuxuuna ka dhacay meel ku dhow bacadlihii hore ee degmada Xamarweyne, baabuurka waxaa watay laba xildhibaan oo midkood uu ahaa Sheekh Aadan Mad-deer iyo mudane kale, markii ka dageen gaariga ayuuna qarxay,” ayuu HOL u sheegay mid ka mid ah goobjoogayaashii ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay.
Dadka rayidka ah ee ku dhintay qaraxa ayaa la sheegay inuu yahay hal qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen toddoba qof oo kale oo rayid ah, balse lama oga khasaaraha soo gaaray ilaaladii xildhibaannadan ee gaariga saarnaa markii uu qaraxu dhacayay.
Ma jirto cid sheegatay inay weerarkan ka dambeyso, balse mas’uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeeya weerarrada noocan oo kale ah inay ka dambeyso Al-shabaab oo dagaal kula jirta.
Wixii warar ah ee kasoo kordha waxaad kula socon doontaan wararkeenna dambe haddii ALLE ogolado.
Jowhar oo lagu qabtay nin fuliyay falkii ugu xumaa taariikhda dhaw oo ka dhaca gudaha Soomaaliya.
Wararka laga helaayo magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada amaanka ee degmadaasi ay gacanta ku dhigeen nin si arxan darro ah u dilay hooyo Soomaaliyeed kadib markii uu fara xumeeyay .
Toxob Muuse oo ay walaala ahaayeen haweenta dhibaatadu ku dhacday oo war-baahinta u sheegaay waxa dhacay iyo qaabka ay u dheceen ayaa magaca Hooyada fara xumeynta iyo gowraca leesugu daray ku sheegay Maka Jiin.
Ninka ciidamadu qabteen ee Haweeneydaan fara xumeynta iyo gowraca u geestay ayaa waxaa gacanta lagu soo dhigay xilli uu ku sugnaa beertiisa kadib markii baadi goob ay sameeyeen ciidankii ku baxay halka mashaqadu ka dhacday.
Eedeysanaha oo aan wali qiran danbiga loo heesto ayaa la sheegayaa inuu ku jiro saldhigga Police-ka degmada Jowhar halkaasi oo su’aalo lagu weydiinayo, waxaana wararku intaa ku darayaan in markii gabadha gowraca iyo kufsiga leesugu darayay ay mareysay meel baadiya ah oo Jowhar duleedkeeda ah.
Ururka haweenka Sh/dhexe ayaa ka hadlay arintaasi naxdinta leh waxaana magaca ururkaasi ku hadlay Sacdiyo Maxamed Nuur oo ah gudoomiyaha haweenka gobalkaasitaa oo canbaareysay falka waxashnimada leh dhanka kalana soo dhaweysay dadaalka ciidmada amaanku ay sameeyeen ee lagu soo qabtay ninkii dhibkaasi geestay.
Taliyaha Nabad Sugidda gobalka Sh/hoose Col Catoosh oo weerar kadis ah lagu dhaawacay meyd ahaanna looga tegay iyada oo ilaaladiisiina lalaayay.
Cabdulaahi Cali Axmed, Gudoomiyaha deegaanka KM50 ee gobalka Sh/hoose ayaa waxa uu xaqiijiyay in taliyihii nabad sugidda gobalkaasi deegaanka KM60 lagu dhaawacay weerar la doonayay in lagu khaarijiyo iyada oo laba kamid ah ilaladiisa halkaasi ay ku geeriyoodeen.
Cabdulaahi Cali Axmed ayaa waxa uu yiri, “Maleeshiya qaab qabiil u abaabulan oo wata tuutaha qaranka ayaa wadada u galay taliyaha ciidanka Nabad-sugidda gobalka Sh/hoose waxa ayna rasaas ugu fureen gaariga si arxan darro ah. Taliyaha xabado badan ayaa ku yaalla laba ilaaladiisa kamid ah ayaa iyana dhintay waxa ay daayeen darawalkii gaariga wadaya oo ay ku amreen in uu geeyo meydadka halka ay markii hore kasoo bexeen”.
Waxa uu intaa raaciyay, “Taliyaha waa noolyahay Alla Mahadii. Weerarka lagu qaaday waxa uu salka ku hayaa dagaal KM50 ka dhacay kaas oo u dhexeeyay dadka deegaanka iyo qolooyin ka yimid 1500 Kilo Mitir ka xagga oo doonaya in ay shacabka deegaankaan caburiyaan”.
Col Catoosh ayaa la sheegayaa in Isbitaalka Daaru Shifa ee magaalada Muqdisho lagu daweynayo iyada oo lasoo tebinayo in xaaladiisu ay yara degantahay.
Gobalka Sh/hoose ayaa waxa uu kamid yahay deegaanada ay ka jiraan is-qab-qabsiga dhanka qabiilka ah iyada oo dhowr jeer oo hore ay dheceen qalalaase lagu weeraray masuuliyiin dowladeed arintaas oo sababtay in wasarada arimaha gudaha Soomaaliya ay xil ka qaadis ku sameyso maamulkii hore ee degmada marko kuwaas oo si aad ah isu qabtay.
Kooxa la’aaminsanyahay in ay Shabaab ka tirsanyihiin oo ku dhamaaday miinooyin ay diyaarinayen oo kula qarxay guri ay ku jireen.
Macalim Maxmuud Saney, gudoomiya ku-xigeenka degmada Wada-Jir ee gobalka Banaadir ayaa waxa uu xaqiijiyay in qarax xooggan uu ka dhacay guri ku yaala waaxda Xalane ee degmadaasi kaas oo galaaftay laba ruux oo qaraxa halkaasi ku diyaarinayay halka ay ku dhaawacmeen shacab guriga ku noolaa.
“Qaraxa waxa uu ka dhacay guri dhexdii salaadii subax kadib. Waxaa goobta gaaray ciidamada amaanka, waxaana loogu tegay laba meyd ah oo halkii qaraxu ka dhacay taalla iyo dhaawac shacab guriga wax uga noolaa wali baaritaan ayaa socda”, Macalim Maxmuud Saney ayaa ku waramay.
Macalim Maxmuud Saney ayaa waxa uu sheegay in meydadkii ay wali yaallan halkii qaruxu ku haleelay.
Inkasta oo aan la’ogeyn qolyaha qaraxa ku dhintay in ay ahaayeen Shabaab ayaa hadana waxaa caan ku ah in ay diyaariyaan qaraxyo kooxda Shabaab iyada oo dhowr mar oo hore sidaan oo kale ay qarax ku dhinteen rag diyaarinayay miinooyin lagu laayo dad fara badan.
Qaraxa maanta ayaa waxa uu shakiga ka saarayaa warar sheegayay in qaraxyada lagu soo diyaariyo meel ka baaxsan caasimada kadibna lasoo geliyo Caasimada iyaga oo bar-tilmaameed uun ku wajahan.
Dharka ciidamada Milatariga Dowlada oo gudaha Al Shabaab qaali ka noqday & cida xado kana iibiso oo la ogaaday (Warbixin)
Maleeshiyaadka xarakada Al Shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay xooga saareen sidii ay ku heli lahaayeen dareeska ama Tuutaha orjinaalka ah ee ciidamada Milatariga Dowlada kuwaas oo u is ticmaalo qaraxyo cusub oo nuucooda aanan horay loo arag.
Al Shabaab ayaa Tuutaha orjinaalka ah ee ciidamada Milatariga Dowlada waxa ay ku soo labistaan iyaga oo dhoor nin ah ka dibna waxeey si toos ah u weeraraan goobo qorsheeysan oo bartimaameed ah kuwaas oo ugu dambeeyntii dhamaantood is wada qarxiya.
Weerarada nuucaan ah waxa ay kooxda Al Shabaab ka geesteen xarunta Maxkamada Gobolka Banaadir iyo xaruntii hay'adda UNDP ee magaalada Muqdisho.
Saraakiisha Sirdoonka dowlada oo mudo dheer baarayay cida ama dadka ka iibiya maleeshiyaadka Al Shabaab Tuutaha orjinaalka ah ee ciidamada Milatariga Dowlada ayaa iminka waxaa lagu sheegay inay yihiin Caruur caseeye ah oo in mudo ah u xilsaarnaa buraashida ama nadiifinta Kabaha ciidamada Dowlada.
Dhalinyaradaan oo dhanka nadaafada lacag ku qaadan jiray bil kasta waxa ay ka faaideeysan jireen marka la dhaqo dharka ciidamada milatariga dowlada kuwaas oo si sahal ah uga qaadan jiray goobaha lagu waro ama lagu qalajiyo.
Dareeska ama Tuutaha orjinaalka ah ee ciidamada Milatariga Dowlada oo Calanka Soomaaliyeed uu kaga dhegan yahay garabka, waliba aanan si sahal ah looga fujin karin waxaa la xaqiijiyay in gudaha Al Shabaab uu ka joogo halkii Joog lacag lagu sheegay 250 Dollar.
Dr. Baadiyow Siyaasi u gurbaan tumayo Mucaaradnimada Xukuumadda Somalia. (Warbixin Muhiim ah).
Dr. Abdirahmaan Baadiyow, oo kamid ah Musharaxiintii looga guuleystay Doorashadii Madaxtinimadii ugu dambeysay ee Somalia, kana tirsan Guddiga Badbaadinta Qaranka Somalia ee lagu yagleelay Magaalladda Nairobi ee Xarunta dalka Kenya, ayaa sheegay in Xukuumadda Somalia ay ka wada dhexeyso Ummada Soomaaliyeed.
Dr. Baadiyow ayaa waxa uu sheegay in Madaxweyne Xassan Sheikh Maxamuud uu yahay Madaxweyne Soomaaliyeed balse Xukunka dalka uu yahay mid aan ka hadal laheyn oo ka dhexeeya gabi ahaan Bulshadda Soomaaliyeed.
Waxaa kamid ahaa Haddalka Dr. Baadiyow ‘’Dawladda Somaaliyeed waa la wada leeyahay, waana loo simanyahay oo dadka oo dhan waa muwaadiniin. Waa in aan la kala xigsan dawladnimada, dadaka oo dhanna waxaa u dhexeeya waa Dastuurka oo la dhawro’’ Ayuu yiri Dr. Baadiyoow, oo dhanka kale sheegay in Xukuumadda Somalia aysan wax waliba isku koobin.
Mar aan wax ka weydiiyay Dr. Baadiyow dhismaha Guddiga Badbaadada Qaran ee lagu yagleelay Magaalladda Nairobi, ayaa waxa uu sheegay in Guddigaasi uu yahay mid aan waxba ka jirin.
Sidoo kale mar aan Dr. Badiyow wax ka weydiiyay sida uu u arko Xariga Xassan Dahir Aweys ayaa waxa uu meesha ka saaray inuu ka xun yahay xariga Wadaadka Alshabaab ka soo goostay ee Xassan Dahir Maxamuud, isagoona sheegay in arrinkaasi uu yahay mid aan sal iyo baar ku laheyn xaqiiqda inuu ka xun yahay Xarigiisa, waxa uuna Tilmaamay in Arrinta Xassan Dahir uu yahay mid horyaala Xukuumadda Somalia loogana baahan yahay inay go’aan ka gaarto.
Waxa uu beeniyay wararka leysla dhex maraayo ee ku aadan inuu kamid yahay Mas’uuliyiinta ku jirta Guddiga Badbaadinta Qaranka Somalia oo ay ku bahoowen Siyaasiyiin Qaswadayaal, waxa uuna dhanka kale, sheegay in loo baahan yahay in Xilligaani Mucaarad la helo, Dalkuna uu yahay mid ka dhexeeya Shacbiga Somalia iyadoo la tix-raacaayo Dastuurka dalka u degsan.
Dr. Baadiyo, oo looga itaal roonaaday Doorashadii Somalia, ayaa waxa uu iminka u muuqdaa mid adeegsanayo Siyaasad ay ku dheehan tahay Mucaaradnimo, wallow dadka qaar ay is weydiinayaan Ujeedka ka dambeysay in Baadiyow uu xiligaani ka soo horjeysto Xukuumadda Somalia oo la sheegay mid ay Mabda ahaan isu dhow yihiin Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somalia Md. Xassan Sheikh.
Ugu dambeyntii, Guddiga lagu yagleelay Magaallada Nairobi,ayaa waxaa ku bahooway Tiro Siyaasiyiin isugu jira Siyaasiyiin ku fashilantay Masraxa Siyaasadda, kuwo Dowladda ka waayay xilal iyo kuwo Daneystayaal ah oo damac beeleed iyo damac Shaqsiyadeed iyo dane shisheeye ku howlan
Maraakiib Dagaal oo Duqeyn Culus ku garaacay Ciidamo Daacad u ah Barre Hiiraale iyo Ciidamo kale oo Dowlada katirsan
Wararka laga helayo deegaanka Goob-weyn ee gobalka J/hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka Badda Kenya ay duqeeyeen goob ay kusugnaayeen qaxooti isga cararay magaalada Kismaayo iyo xubna kamid ah ciidanka Meleteriga iyo dagaalamayaasha Barre Hiiraale oo iyana kamid ahaa shaqsiyaadkii muruqa foodiisa looga saaray Kismaayo.
Qaar kamid ah qoysaska isaga barakacay Kismaayo ee ku sugan Goob-weyn ayaa waxa ay xaqiijiyeen in duqeyntaasi uu geestay markab ay leeyihiin ciidanka Badda Kenya oo taagan xeebta Soomaaliya.
Inta la ogyahay ilaa shan ruux oo qaar kamid ah ay yihiin ciidanka dowlada Soomaaliya ayaa dhaawacantay inkasta oo qasaaruhu intaa ka badan karo maadaamaa deegaanka si ad ah loo duqeeyay dadka barakacayaasha ah ee Kismaayo ka huleelayna ay ku firirsanyihiin dulka howdka ah.
Waa markii labaad ee ciidanka Kenya ay duqeeyaan ciidamada dowlada Soomaaliya, Shacab iyo dagaalamayaasha Barre Hiiraale oo ah nin sheegta in uu yahay Madaxweynaha Jubaland kaas oo si qasab ah magaalada looga saaray kadib markii ciidanka Kenya ay garab meletri siiyeen Axmed madoobe oo ah nin ay isku heestaan madaxtinimada Jubaland Barre Hiirale.
Si kastaba, maamulka Barre Hiiraale kama hadlin wali weerarka ciidamada Badda Kenya ay ku qaadeen deegaanka Goob-weyn oo ah halka uu ku baxsaday kadib markii uu naftiisa kala baqay ciidanka Kenya iyo Jabhada Raas-kanbooni.
Yaa ka dambeeya Qaraxyada Kismaayo lagula begsado Ciidamada AMISOM ee Siera Leon?? (Xog la helay)
Illo-wareedyo ka tirsan Xukuumadda Somalia, ayaa Shabakadda Allbanaadir u xaqiijiyay in Qaraxyada Kismaayo lagula eeganaayo Ciiddamada AMISOM gaar ahaan kuwa dhawaan la geeyay ay ka dambeyso Kenya iyo Raaskambooni.
Shabakadda oo xiganeysa Mas’uul ka tirsan Xukuumadda gaar ahaan Wasaaradda Gaashandhiga, ayaa waxaa la sheegaya in Ciiddamadda Kenya iyo Raaskambooni ka careysan yihiin hadalkii dhawaan ka soo yeeray Midowga Africa oo ahaa in Ciiddamadda Kenya laga saarayo Kismaayo kadibna la geyn doono Ciiddamo aan lug ku laheyn Siyaasadaha Kismaayo.
Mas’uulka ayaa waxa uu sheegay in Xukuumadu ay kawarqabto in Qaraxyada lala eeganaayo Ciiddamadda AMISOM gaar ahaan kuwa Siera Leon ay ka dambeeyan Ciiddamadda Kenya oo adeegsanaayo kuwa Raaskambooni si loo carqaladeeyo faragalinta Xukuumadda ay ku heyso Maamulka Jubbaland garabka Axmed Madoobe oo aan sharciga la waafajin.
Dhanka kale, Mas’uulka ayaa sheegay in Xukuumadu ay ka warqabto dhaqdhaqaaqyada ka socda Kismaayo oo ay isu garabsanayaan Kenya iyo Raaskambooni, isagoona sheegay in Axmed Madoobe uu qaadi doono Khasaara waliba oo soo gaaro Ciiddamadda AMISOM gaar ahaan Siera Lion.
Ugu dambeyntii, Mas’uulka ayaa waxa uu sheegay in Ciiddamadda Raaskambooni ay miinooyinka ku aasan wadooyinka iyo goobaha ay isticmaalaan Ciiddamada Siera Lione taasina ay ka warqabaan Saraakiisha AMIOSM Ugandha iyo Burundi, balse go’aan laga soo saari doono.
Xukuumada Soomaaliya oo lagu taliyay in si dhaqs ah kalsoonida loogala laabto sabab jira aawadood.
Gudoomiyaha Xisbiga Cadaalada iyo nabada, Cabdullahi Sheekh Xassan, ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya, looga baahanyahay in ay kalsoonida kala laabtaan xukuumada si loo soo dhiso xukuumad tayo leh oo amaanka wax ka qabata.
“Ma aha baarlamaanka oo sharci dejiyahaa dalka ah uu ku fiirsado shacabka dhibaatada soo gaareysa ee xukuumadu masuulka ka tahay. Xukuumada Saacid waxa ay ku guul dareysatay amaanka dalka. Amaanku waxa uu marayaa sida 2010-kii. Si taa looga gudbo baarlamaanka waxaa lagudboon in ay kalsoonida kala laabtan xukuumada si loo badbaadiyo dhiigga shacabka eek u dadanaya casimada”, Cabdullahi Sheekh Xassan ayaa ku nuux-nuuxsaday.
Cabdullahi Sheekh Xassan ayaa raaciyay, “Xukuumadu waxa ay shaqada la waregtay iyada oo xili habeen ah leesku dooranayo magaaladaan. Iyaga ayaa leh masuuliyada amaan darrada. Markii ay dalka laawaregenba waxa ay xilalkii ka qadeen saraakiishoo hogaaminayay ciidanka ee Shabaabka ladagalamay kana saaray deegaanno badan iyaga oo doonaya in ay hogaanka ciidanka u dhiibaan shaqsiyaad ay daneynayaan aanna fiirineyn danaha shacabka iyo dalka guud ahaan”.
Hadalka Gudoomiyaha Xisbiga Cadaalada iyo nabada ayaa waxa uu imaanayaa iyada oo waayihii danbe ay soo baxayeen warar sheegaya in xukuumada Soomaaliya isku dhaandheyn lagu sameyn dono kadib markii wasiirraa badan ay gudan waayeen howlihii loo xilsaaray.
Dhowr jeer oo hore ayaa siyaasiyiin waxa ay sida Cabdullahi Sheekh Xassan oo kale ay soo jeediyeen in xukuumada kalsoonida lagala laabto iyaga oo ku andacoonaya in ay gudan weysay wajibaadkeeda shaqo.
Si kastaba lama oga sida baarlamaanka Soomaaliya oo la ogyahay sida uu u difaacay xukuumada Saacid xilligii Mowshinka laga keenay, ay ugu dhega nugaan karaan hadalka Gudoomiyaha Xisbiga Cadaalada iyo nabada, Cabdullahi Sheekh Xassan.
Shabaab oo la shaaciyay in ay dhib ku hayaan dadkii soo bar-baariyay ee awooda u yeelay (Waa kuwee?)
Ugaas Maxamed Weli oo ahaa oday dhaqameed aad u taageera Shabaab hasa yeeshee waayihii danbe cadeestay in uu kalsoonida kala laabtay ayaa waxa uu ku eedeeyay Shabaab in ay qaraxyo, dilal iyo hanjabaadaba ay u geestaan shacabka Muqdisho oo ahaa kuwii awooda ay ku naaloonayaan u yeelay.
Oday dhaqameedkaan ayaa waxa uu yiri, “Shabaab waxa ay dhibaata badan oo isugu jirta qarxin, Dil iyo hanjabaad ku hayaan shacabka reer Muqdisho oo la’ogyahay sida ay qeyb uga qaateen in Shabaab soo muuqdo oo uu gaaro guula waaweyn”.
“Shabaabka waxa aan leeyahay ka daaya shacabka sidaa hayeelinee. Laguma jisaaro ruuxii ku garab qabtee. Shacabkii waxa ay idinka hoos galeen Gaalo ay kamid yihiin Burundi, Uganda iyo Kenyaati sida aad u cadaadineyseen. U dhimriya oo ka daaya qaraxyada, Dilalka iyo hanjabaada”, Ugaas Maxamed Weli ayaa kula taliyay.
Ugaaska ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in lagama maarmaan ay tahay xilligaan in shacabka Muqdisho ay helaan nabad maadaama ay dhibaato xilli dheer kusoo jireen.
Eedeynta ugaaska uu Shabaabka u soo jeediyo ayaan noqoneyn tii ugu horeysay ee ruux in badan Shababaka taagera u ahaa oo ugu danbeyn isaga soo baxsaday lana soo baxay hadala kulul oo uu uga soo hor-jeedo fikirkii uu amrkii hore qarashka, maalka iyo waqtigaba ku bixinayay.
Si kastaba waxaa hadalkiisa uu kusoo beegmayaa iyada oo Muqdisho waayihii danbe gaar ahaan bishaan barakeysan ee Ramadaan ay kusoo badanayeen falakka manaan darro kadib markii Shabaabku sheegten in ay badinayaan weerarada inta lagu jiro bishaan Barakeysan.
Daawo Sawirka Haweeney Madaxweyne ah oo lasoo bandhigay iyada oo u jilbo jabsatay madaxweynayala kale si ay u xushmeeso
Haweeney Madaxweyne ka ah Dalka Malawi Joyce Banda ayaa lasoo bandhigay iyada oo u jilbajabsatay Madaxweynayaal kale si ay u salaanto.
Haweeneedan Madaxweynaha ah oo arintaasi wax laga weydiiyay, ayaa waxa ay sheegtay in dhaqanka Dalkeeda uu sidaa yahay ixtiraam Awgeed, iyadoona beenisay inay isu duleyneyso Madaxda dhigeeda ah.
Joyce Banda, oo ay mar qura wada qabteen Kaamiradaha, ayaa waxaa Su’aal laga weydiiyay sababta keentay iyadoo Madaxweyne ah inay u jilba jabsato Madaxweynayaal kale, ayaa waxa ay ku jawaabtay in Jilba jabsiga uu ka weyn yahay Sumcada iyo sharafta Madaxdaasi.
Dalka Malawi, ayaa waxaa ixtiraamkii ugu dambeeyay ka ah inad rux u jilba jabsato si aad u salaanto, balse dhaqankaasi ma ah mid ay wada qabaan guud ahaan dalalka Africa.
Waa dhaqan markii ay ishu ku dhacdo ruuxa jilbaha laabanaayo aysan ishi sii eegi Karin, waayo inta badan shucuubta reer Africa waxa ay arintaasi ka aaminsan yihiin in quux kale leysu duleeyo.
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo loo diiday in ay galaan Madaxtooyada Mararka qaarna jir dil loo geesto
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cabasho balaaran waxa ay ka keeneen dhibaatooyin ay sheegeen in ay kala kulmaan gudaha Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya marka ay damcaan in ay galaan.
Xildhibaanadan ayaa maanta cabasho balaaran oo ku aadan dhibaatooyin cusub ay sheegeen in ay kala kulmaan galitaanka Xarunta Madaxtooyada Villa Soomaaliya waxa ay u gudbiyeen Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya.
Mid kamid ah Xildhibaanada Cabashada Gudbiyay oo lagu Magacaabo Fanax ayaa sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ku adkaatay in a galaan xarunta Madaxtooyada laguna amro askarta in aysan soo deyn halka mararka qaarna uu sheegay in ay jir dil kala kulmaan ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya.
Xildhibaankan ayaana Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday in ay cadeeyaan hadii Madaxtooyada uu kasoo if baxay sharci cusub oo dhigaya in xildhibaanada aysan Madaxtooyada soo gali Karin.
Cabashada kasoo yeertay Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ah mid mudooyinkii dambe isa soo taraysay iyadoona xildhibaano gaar ah la karaameeyo marka ay Madaxtooyada tagayaan halka kuwa kalana albaabka laga celiyo oo loo diido in ay danahooda kasoo fushadaan Madaxtooyada Qaranka Soomaaliya
Daawo sawirada:Magalada Dubai ayaa lugu arkay arin yaab leh oo cabsi badan ku abuurtay dadka ku nool dalka imaratka carabta .
Magaalada Dubai ee xarunta wadanka isu taga imaaraadka carabta ayaa lagu arkay arimo yaab leh oo dhamaan dadka ku nool magaalada deggan ay cabsi badan dareemeen.
Magaalada oo ah xarunta weyn oo lugu ganacsado hada neh ka dhisan dhismooyinka dunida ugu dheer ayaa mar kaleya waxaa la arkay daruuro dersin ah oo duulaya, isla markaana si toos ah usoo dhex galay dhismooyinka dhaadheer ee magaalada ka dhisan…
Waxaa la sheegay in arintan ay noqotay mid aad loola yaabay, dadka deegaankuna ay cabsi badan dareemeen, maadaama aysan horey u arag daruur soo gaarta dhulka hoose ee deegaanka u ah bulshada.
Madaxweynaha J.F.S. Oo Sheegay In Dowladnimada Soomaaliya Ay Ku Xirantahay Nidaaminta Ciidamada Qalabka Sida
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in dowladnimda Soomaaliya ay ku xirantahay nidaamka ciidanka qalabka sida isagoo caddeeyay in doowladu ay muhiimada koobaad siineeyso Ciidamada Qalabka Sida.
Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya oo ka hadlay baahida loo qabo ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in dowladu mudnaan gaar ah siindoonto tayeeynta ciidamada iyo sidii ay ugu heli laheyd Mushaar joogta ah.
‘’Hadba ciidamada Qalanka Sida nidaamkooda inta uu la egyahay ayeey dowladnimadeenuna la ekaaneysa, li’anna awooddii qaladka lagu hor istaagi lahaa awooddii sharciga lagu meel marin lahaa waa ciidamada Qalabka sida’’ Sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha J. F, Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa intaasi ku daray in haddii aan la hagaajin ciidamada an la helidoonin amni, nidaam iyo kala dambeyn.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa tilmaamay in garaamka iyo mushaaraadka ciidamada ay dowladu si joogta ah u bixindoonto, wuxuuna hoosta ka xariiqay in dowladdu ay mudnaanta siineyso daryeelka ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula dardaarmay ciidamada qalabka sida iney si wadaninimo ah u gutaan waajibaadkooda ayna ilaaliyaan nidaamka iyo asluubta ciidanka isagoo hoosta ka xariiqay in sharafta iyo sumacada ciidamadu ay ku xirantahay hadba sida ay u aamninaan shacabka Soomaaliyeed.
Sheekh Shariif oo ka hadlay Wararka sheegaya in uu kamid yahay Qas-wadeyaasha Cusub ee Soomaaliya.
Daawo Sawirada :Shabaab oo soo ban-dhigay awood meleteri oo ay ku naaloonayaan wali.
Kooxda Shabaab ee ka dagaalanta Bariga, Bartamaha iyo Koofurta Soomaaliya ayaa waxa ay maalintii shalay aheyd soo ban-dhigtay dhoola tus meleteri oo ay ku muujinayaan cududooda ciidan kadib markii ay tababar u soo idleeyeen in badan oo kamid ah raga daacada u ah kooxda dagaalka xooggan kula jirta dowlada Xassan Sheekh iyi ciidamada Shisheeye.
Dhoolatuskaan ayaa waxa uu ka dhacay degmada Baraawe ee gobalka Sh/ Hoose halkaasi oo kamid ah goobaha Shabaabku ay ku xooganyihiin xilligaan waxaana dagalamayaashu ay magaalada ku soo maareen socod iyaga oo watay gaadiidka dagaalka oo nuucya kala duwan leh.
Sheekh Maxamad Abuu Cabdalla oo ah ninka Shabaabka u qaabishan Sh/hoose oo saxaafadda lahadlay ayaa yiri, “ciidamadan waa qeybta ilaalisa sharciga Allaah iyo amniga deegaanka Sidoo kale waa ciidamo u tababaran hawlaha deg degga ah" ee wilaayada looga baahan karo”.
Ciidamadan oo loo yaqaanno “Fursaanul xisbah” oo ah dufcaddii labaad ee ay soo bandhigaan maamulka Sh/hoose ee Shabaabka ayaa ka qeyb qaadanayaan dagaalka bishan barakeysan ee Ramadaan sida uu sheegay Sheekh Maxamad Abuu Cabdalla.
Dhoola tuskaan ayaa waxa uu imaanayaa iyada ay dowlada Soomaaliyaa wax badan ku cel-celisay in laga awood badiyay Shabaab, waxaana arintaani ay cadeyneysaa in Shabaabku wali noolyihiin ayna leeyihiin xaruma wax lagu taba baro oo ay duf-cad duf-cad uga soo baxayaan dagaalamayaal daacad u ah xabad ay kala hor-yimaadaan dowalda Soomaaliya iyo ciidamada shisheeye ee dalka Nabad ilaalinta u jooga.
Dagaal dad ku dhinteen Guulna laga sheegtay oo habeenkii xalay ahaa ka dhacay duleedka magaalada..
Wararka laga helaayo magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay ayaa waxa ay sheegayaan in habeenkii xalay ahaa dagaal xooggan uu ka dhacay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobalka Baay halkaas oo maamulka dowlada Soomaaliya ay ka sheegteen guula lataaban karo.
Dagaalka oo dhacay kadib markii kooxda Shabaab dagaalamayaal ka tirsan ay weerar gaadma ah ku qaadeen saldhigya ciidamada dowlada Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka Awdiinle.
Gudoomiyaha Awdiinle ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi Shabaabku ay ku guul dareesteen laba ruuxna looga dilay oo meydkoodii ay ka carareen walina ay goobtii yaallaan.
Shabaabku wali dhankooda kama hadlin sheegashada dowlada Soomaaliya ee ku qotonta in ay guul ka gaareen dagaalkii xalay ayna dileen dagaalamayaal Shabaab ah.
Al-shabaab ayaa waxa ay inta badan fuliyaan weerarro gaadma ah oo ay la eegtaan fariisimaha ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa shisheeye ee dalka ku sugan iyada oo duulaanadaas badankood la fuliyo xilliyada habeenkii.
Cali Khaliif Galeyr oo lumiyay Miisaanka Siyaasadeed uu ku dhex lahaa Somalia iyo isaga oo ay Siyaasadu ku xuntahay.
Cali Khaliif Galeyr oo ka tirsan Siyaasiyiinta ugu caansan Dalka Somalia, ayaa waxa uu xilligaani lumiyay Siyaasadii uu ku dhex lahaa Somalia.
Cali Khaliif, oo muddooyinkaani ku sugan Magaalladda Nairobi ee Cariga Dalka Kenya, ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu u hanqal taagayo inuu ku biiro Maamulka Somaliland, halka dadka qaarna ay sheegayaan inuu Siyaasad ahaan isku dhiibay Maamulka Jubbaland garabka Axmed Madoobe oo uu kulamo kala duwan kula qaatay Magaalladad Nairobi.
Cali Khaliif Galeyr ayaa waxa uu muujinaaya itaal yari kaga imaaneysa dhanka Xukuumadda Somalia, isagoona quus ka taagan qaabka ay ula dhaqmeyso Dowladda Xassan Sheikh Maxamuud.
Illo-wareedyo ku dhow dhow Mr. Galeyr ayaa Shabakadad Allbanaadir u xaqiijiyay in Cali Khaliif uu kusii jeedo dhanka Somaliland iyadoona ay Illo wareedka sheegayaan inuu wada hadalo la furi doono Maamulka Axmed Siilaanyo.
Ugu dambeyntii, Cali Khaliif, ayaa waxaa lagu soo waramaaya inuu colaad u qaaday Xukuumadda Somalia ee Xassan Sheikh kadib markii ay lumisay Miisaankii Siyaasadeed ee uu ku dhex lahaa Somalia.
Soomaalida ku sugan waqooyiga dalka Norway ayaa waxaa la sheegay inay culumadu u fidyootay inay la soomaan dalka Sacuudi Carabiya maadaama aysan suuro gal ahayn inay ku soomaan daruufta ay ku sugan yihiin taas oo ka dhigan inay Soomanaadaan waqti ka badan ilaa iyo 20 saacadood islamarkaana ay heystaan oo qura dhowr saacadood inay ku afuraan ku saxuurtaan kuna tugadaan salaadaha, Maqrib, cishe iyo taraawiix arintaas oo ah mid run ahaantii aad iyo aad u adag, Hadaba culumo Soomaaliyeed oo booqatey deegaanadaas ayaa waxay go'aamiyeen in Soomaalida ku nool dalka Norway ay la soomaan dalka Sacuudiga oo ayna la afuraan dalkaas.
Sheekh Xasan Daahir Aweys ayaa la sheegay in afkiisa laga hayo sidatan " Hadii la i masaafuriyo oo dal kale la ii dhoofiyo waan ka soo laaban doonaa waxaana balan ah inaan la dagaalami doono ciidamada AMISOM ee gudaha Somalia ku sugan iyo ururka Al Shabaab oo Shareecada Islaamka ka been sheegay "